Thailand dia mizaha ny haitao 5G an'i Huawei na eo aza ny ahiahy | Androidsis
Huawei, ZTE, Qualcomm sy orinasa hafa no mpilalao lehibe eo amin'ny sehatry ny haitao 5G. Orinasa maro no miara-miasa amin'ny firenena samihafa hanandramana teknolojia vaovao 5G. Anisan'izany i Huawei, miatrika olana any amin'ny firenena sasany noho ny fandraràn'i Etazonia ny fampiasana ny fitaovany. Ho fanampin'izay, ny firenena amerikana aza dia nanentana ireo mpiara-dia aminy hametra ny fampiasana ny Fitaovana Huawei 5G eo am-panaovana teknolojia vaovao.
Tao amin'ny teaser iray, ny mpiara-dia amin'i Amerika farany any Asia, Thailand, dia niara-niasa tamin'i Huawei ho an'ny refy 5G. Na eo aza ny fanerena maharitra avy any Etazonia tsy hampiasa ny fitaovan'ny Huawei, manao ny mifanohitra tanteraka amin'izany i Thailand. Izy ireo no andrana voalohany amin'ny orinasa sinoa any atsimo atsinanana.
Na dia miahiahy momba ny fiarovana ihany koa i Thailand, dia nilaza izany ny fiaraha-miasa dia tsy midika hoe tsy miresaka resaka fiarovana izy ireo. Ka dia mibanjina ny orinasa sinoa izy. (Vao tsy ela akory izay: Huawei dia manolotra laboratoara amin'ny fiarovana an-tserasera any Polonina hialana amin'ny fandraràna 5G)
“Manara-maso akaiky ny fiampangana erak'izao tontolo izao izahay. Na izany aza, fotoam-pitsapana ho an'ny firenena ity tetikasa fandriana fitsapana 5G ity, ”hoy i Pichet, Minisitry ny Toekarena nomerika any Thailandy. "Afaka manao fandinihana isika izay hanampy amin'ny fanamafisana na ny tsy fanamafisana ireo fiampangana."
Raha niresaka momba ny toeram-pilalaovana 5G vaovao tao amin'ny campus Sriracha an'ny Oniversite Kasetsart ao amin'ny faritany afovoan'ny Chonburi, Nilaza i Pichet fa manahy momba ny fiampangana momba an'i Huawei ny governemanta. Ankoatr'izay, orinasa hafa, toy ny Nokia, Ericsson, ary mpandraharaha telecom Thai, dia miasa ihany koa amin'ny tranokala mitovy amin'ny teknolojia 5G. (Jereo: Nolavin'ny mpanorina an'i Huawei fa mitsikilo an'i Etazonia ny orinasa)
Thailand dia miasa mba hitondra serivisy 5G ara-barotra amin'ny taona 2020. Amin'izao fotoana izao dia mitarika amin'ny teknolojia farany miaraka amin'i Singapore izy io. Nanampy i Pichet Duriongkaveroj fa misy mpandraharaha telefaona japoney sasany liana ihany koa hiasa amin'ny fitsaràna 5G ao amin'ny firenena.
Ny masoivoho amerikana any Bangkok dia nilaza fa i Etazonia dia "miaro ny tambajotram-pifandraisan-davitra azo antoka sy ny rojom-panolorana izay tsy misy mpivarotra iharan'ny fanaraha-mason'ny governemanta vahiny na fitaomana tsy ara-dalàna izay miteraka risika amin'ny fidirana tsy ara-dalàna sy ny asan'ny cyber. Hoy ihany ny mpitondra teniny: "Matetika izahay dia miangavy ny mpiara-miasa sy mpiara-miombon'antoka mba handinika izany loza izany ary hiambina mba hiantohana ny fiarovana ny tambajotram-pifandraisan'izy ireo sy ny rojom-panolorana, ao anatin'izany ny fanomezana fifanarahana."
Huawei, izay miankina amin'ny orinasa ivelan'i Shina, dia manamboatra fomba hahazoana antoka fifanarahana sasany. Izy ireo dia efa niantoka fivarotana varotra mihoatra ny 30 5G manerantany. Ny orinasa sinoa koa dia miresaka amin'ny mpandraharaha telecom sasany hananganana fiaraha-miasa eo an-toerana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Thailand dia mizaha ny haitao 5G an'i Huawei na eo aza ny ahiahy
Sivanina ny vidin'ny LG G8 ThinQ miaraka amina memoara 128 GB